Fanina amin’ny fandikan-teny: Nahoana ny Google Translate matetika no mandiso amin’ny fiteny Yorùbá sy ny fiteny hafa · Global Voices teny Malagasy
Mandiso ny teny sasany ny ankamaroan'ny fandikan-teny nataon'ny milina.
Voadika ny 17 Marsa 2020 3:31 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, Ελληνικά, Italiano, Yorùbá, русский, 한국어, Esperanto , عربي, srpski, 日本語, English, Türkçe, English
Mpiseran'ny Vondrona Wikimedia ao Nizeria, Oktobra 2018 tao amin'ny Wikimedia Commons CC.BY.2.0.
Nanjaka tamin'ny resaka an-tserasera ho toy ny fiteny “iraisan'ny rehetra” amin'ny fifaneraserana ny fiteny Anglisy hatramin'ny niforonan'ny Aterineto. Tamin'ny Febroary 2020, amin'ny teny anglisy avokoa ny mihoatra ny antsasaky ny tranonkala amin'ny aterineto, araka ny WebTech3.
Niteraka revolisiona nomerika ho an'ny fiteny izany rehefa miha-maro ny olona miditra an-tserasera izay miresaka amin'ny fiteny samihafa — tafiditra avy hatrany amin'ny fandikan-teny anglisy avy amin'ny fiteny marobe rehefa manindry bokotra iray.
Betsaka ny orinasan'ny teknolojia no nikasa nampiditra ny tsy teny anglisy tamin'ny aterineto vao haingana, izay nanokatra ny lalana ho nomerika ireo fiteny marobe. Google, Yoruba Names, Masakhane MT sy ALC no ohatra amin'ireo orinasa sy start-ups nikasa nanambatra ny teknolojia tamin'ny fiteny tsy Anglisy.
Tamin'ny faran'ny volana Febroary 2020, nanambara ny Google fa hampiditra fiteny dimy vaovao amin'ny tolotra Google Translate izy, anisan'izany ny Kinyarwanda, Uighur, Tatar, Turkmen ary Odia, taorian'ny fiatoana efa-taona tamin'ny fanampiana fiteny vaovao.
Lehilahy iray toa very hevitra raha namaky lahatsoratra an-tserasera. Saripikan'i Oladimeji Ajegbile, nalaina maimaim-poana tao amin'ny Pexels.
Efa nanindry teo amin'ny safidy fandikan-teny ve ianao anefa ary nahatsapa fa raha tsara indrindra dia azo EKENA ny fandikan-teny Anglisy ? Fa tsy marina mihitsy raha amin'ilay faran'izay tsy mety indrindra ?
Betsaka ny fifanoheran-kevitra sy ny fahasarotana rehefa manao io karazana fandikan-teny sy miditra amin'io fomba fiasa io.
Manolotra ny fandikana ny fiteny Yorùbá amin'ny teny Anglisy ao amin'ny Google Translate araka izay azo atao ny Twitter, ary mazàna, tsy ratsy tanteraka ny vokatra – angamba misy teny vitsivitsy marina.
Matetika ny orinasan'ny teknolojia no manangona ny fiteny ao amin'ny angondrakitry ry zareo ho an'ny fandikan-teny Anglisy nalaina tao amin'ny aterineto ka mahatonga ireo olana ireo . Mety azo ampiasaina ho an'ny fiteny sasany ity angondrakitra ity, saingy misy olana ny fiteny toa ny Yorùbá sy Ìgbò, fiteny roa lehibe avy any Nizeria, noho ny tsindrim-peo tsy ampy na tsy mifanaraka mba hanondroana ny lantom-peon'ireo teny ireo.
Nanazava ny antony nahatonga ny Google efa-taona taty aoriana vao nanampy fiteny miisa dimy ny mpitondratenin'ny orinasa :
Avy amin'ny fandikan-teny efa misy ao amin'ny tranonkala no ampiasain'ny Google Translate, ary sarotra ho an'ny rafitra ampiasainay ny manome valiny mahomby rehefa tsy misy votoaty maro amin'ilay fiteny ao amin'ny tranonkala. … Saingy afaka nanampy amin'ny fanohanana ireo fiteny ireo izahay noho ny fandrosoana farany teo amin'ny teknolojian'ny milina fianarana sy ny fandraisana anjara mavitrika avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny Google Translate.
Ary manao fahadisoana amin'ny fitsipi-panoratana na tsipelina amin'ireo fiteny ireo ihany koa ny ankamaroan'ny olona . Vokatr'izany, tsy voakajy araka ny tokony ho izy ny fandikan-teny satria tsy voamarika ho tsy mety ireo hadisoana ireo.
Mahatonga ny teny sasany ho diso ny ankamaroan'ny fandikan-teny nataon'ny milina, indrindra fa amin'ireo teny ny fahasamihafana ara-kolontsaina. Ohatra, (samy) manana ny dikany ao anatin'ny resaka kolontsaina ny teny Yorùbá ayaba sy ny obabìnrin . Mandika ireo teny roa ireo hoe “mpanjakavavy” ny ankamaroan'ny milina. Kanefa tsara ny manamarika raha avy amin'ny fomba fijery nentim-paharazana sy ara-kolontsaina fa samihafa ny dikan'ny hoe ayaba sy obabìnrin: midika hoe “mpanjakavavy” ny Ọbabìnrin amin'ny teny Anglisy raha “vadin'ny mpanjaka” kosa ny ayaba.
Na eo aza ireo fahasarotana amin'ny fandikan-teny ireo, nanampy tamin'ny fandrosoan'ny fiteny afrikanina tamin'ny sehatra nomerika ny teknolojia ary nanosika ny famoronana teny vaovao. Nihanitombo ny fiteny afrikana tamin'ny fidiran'ny fitaovana vaovao toy ny smart-finday sy ny tablety satria noforonina mba hanomezana anarana ireo fitaovana sy foto-kevitra ara-teknolojia vaovao ireo ny teny vaovao. Nanitatra ny fampiasana sy ny fomba fampiasa ireo fiteny ireo io fizotra io.
Lasa be pitsopitsony kokoa miaraka amin'ny firongatry ny teknolojia vaovao ny voambolan'ny fiteny Afrikanina maro. Ohatra, manana teny novain'ny teknolojia ny fiteny Yorùbá toy ny erọ amúlétutù (“climatiseur”), erọ Ìbánisọ̀rọ̀ (“telefônina”) ary erọ Ìlọta (“fitotoam-bary”). Torak'izany koa, manana teny toy ny ekwè nti (“telefônina”) sy ugbọ̀ àlà (“fiara”) ny fiteny Igbo. Nanome anarana ireo fitaovana ireo araka ny fiasany ireo fiarahamonina ireo.
Mandritra ny fampianarana fampielezam-baovao sy ny dokambarotra amin'ny fiteny Yorùbá no namantaran'ny mpianatra fa antsoin'ny ankamaroan'ny olona hoe erọ Amóhùnmáwòrán ny fahitalavitra. Niteraka fanontaniana sy hevitra maro ity famoronana teny vaovao ity. Milaza ny mpianatra sasany fa azo antsoina koa hoe erọ amóhùnmáwòrán mifanaraka amin'ny fiasan'ilay fitaovana ny fakan-tsary sy ny fandraisam-peo.
Mahasalama ny fiteny ireo fanambin'ny fiteny ireo eo amin'ny sehatry ny teknolojia – nahatonga ny saina handinika lalina ny fandrosoana amin'ny fiteny sy amin'ny teknolojia izany.
Tamin'ny taona 2019, nanokatra ny ivon-toeram-pikarohana AI (fahaizana voatr'olombelona) voalohany tany Accra, Ghana ny Google, izay nifantoka tamin'ny fanatsarana ny “ahafahan'ny Google Translate maka ny teny Afrikanina ho marina kokoa,” hoy ny CNN. Mihevitra ilay mpikaroka ara-tsiansa Moustapha Cisse, izay mitarika ny asan'ny Google amin'ny AI any Afrika fa “mendrika hampiana kokoa ny kaontinanta ahitana tenim-paritra miisa 2000 mahery,” araka ny notaterin'ny CNN.
Vao haingana no nanambara ny fiaraha-miasan'izy ireo ny Mozilla sy ny BMZ amin'ny fanokafana ny feo ara-teknolojia ho an'ny fiteny Afrikanina. Mbola betsaka ny zavatra hiseho amin'ny hoavy mikasika ny fandalinana ny fiteny Afrikanina amin'ny hetsika toy izao.